Imikhiqizo Factory | China Imikhiqizo Abakhiqizi & Abahlinzeki
Kukanxande tube iphakethe re ...
Factory ngqo intengo 30mm ...
Boiler ingxubevange ipayipi ingxubevange ste ...
Ngokunemba High abandayo udonseleka p ...
Ishubhu eligoqiwe elishisayo ...
Ishubhu eligoqiwe elenziwe ngeshubhu lekhabhoni lensimbi
Ipayipi lensimbi elingenamthungo (Ishubhu elingenamthungo) ucezu olude lwensimbi olunengxenye engenalutho futhi alunamathanga aluzungezile.
Ukucacisa okuphezulu okubandayo okudwetshiwe ngokunemba kwensimbi yensimbi engenamthungo
Isicelo: Isetshenziselwa ukukhiqiza isakhiwo semishini, imishini ye-hydraulic, izingxenye zezimoto, umkhono wensimbi.
I-boiler alloy pipe alloy steel seamless pipe stock
Amapayipi we-alloy ephezulu: 15 crmog, 12 cr2mog, 12 cr1movg, 12 cr2mowvtib, 10 cr9mo1vnb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 T23, SA213 T91, SA213 T92, ST45.8 / Ⅲ 13 crmo44, 10, 15 mo3, crmo910.
Ifektri ngqo intengo 30mm ss isikwele yensimbi ipayipi elingenamthungo 100 × 100
Isikwele sensimbi ipayipi luhlobo lwegama lepayipi lesikwele, okungukuthi, ipayipi lensimbi elinobude obufanayo ohlangothini.Lenziwe ngensimbi yensimbi ngemuva kokucubungulwa. Ukudweba ipayipi lesikwele: imvamisa, insimbi yokuhlubula ayikhiswanga, iyisicaba, isongwe, iphothene ibe yipayipi eliyindilinga, bese isongwa ibe yipayipi lesikwele ngepayipi eliyindilinga bese lisika ebangeni elidingekayo.
Unxande tube iphasela elingunxande steel amanani ishubhu uhlu
Ishubhu elingunxande yinsimbi ende engenalutho yensimbi, eyaziwa nangokuthi ishubhu eliyisicaba, ishubhu eliyisicaba noma ishubhu eliyisicaba (njengoba igama lisho kanjalo). Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izingxenye zemishini nezakhiwo zobunjiniyela ngenxa yesisindo sayo esincane nokumelana okugoba.
Uhla lwentengo yensimbi egoqiwe eshisayo eshisayo insimbi yamapuleti ensimbi
Ingxubevange yensimbi yensimbi ekushiseni okuphezulu inamandla aphezulu okushisa (b≥440MPa) nokumelana ne-oxidation, futhi inokumelana okuthile nokugqwala kwe-hydrogen.
Intengo yefektri ipuleti lensimbi engagqwali
Insimbi engagqwali ipuleti lensimbi ihlanzekile, inepulasitiki ephezulu, ukuqina namandla omshini, i-asidi, igesi ene-alkaline, isisombululo nokunye ukubola kwemidiya.Kuhlobo lwensimbi ye-alloy engagqoki kalula, kepha ayinakho ngokuphelele ukugqwala.
Ipuleti lensimbi le-Bimetallic laminated wear-resisting ngumkhiqizo wepuleti osetshenziselwa isimo sokugqoka indawo enkulu, futhi wenziwa ngokugqama ebusweni bensimbi ejwayelekile yekhabhoni noma i-alloy steel enobunzima obuhle nobupulasitiki nokuhlanganiswa nongqimba lokumelana nokugqoka yobukhulu obuthile ngobulukhuni obuphakeme nokuqina kokugqoka okuhle.
Izinsimbi ezinkulu zeCorten zensimbi ezakha ngaphandle zenziwe ngensimbi yecorten, engasetshenziselwa ukutshala izinhlobo ezahlukene zezimbali. ICorten Steel Planter yakhelwe ngendlela elula kepha ephathekayo, edumile e-Australia nasemazweni aseYurophu. Ngaphandle kwalokho, ukumelana kwayo nokugqwala okuhle kakhulu kungahlala isikhathi eside, abantu abadingi ukuthi bakhathazeke ngokuhlanza izinto nempilo yaso.
Singenza noma yimuphi umklamo omusha njengombono wakho omuhle noma izithombe, unikeze umdwebo we-CAD mahhala.
Kulolu donga lobuciko bensimbi, imvamisa sisebenzisa insimbi enkulu yokumelana nokugqwala njengempahla eluhlaza, ngokuya ngokuthi iphethini ikhasimende lifuna ini, sizoyenza ngokunqunywa kwe-lacer, bese siyishisela futhi siyibhora, bese siyilungisa ngehadiwe elenziwe ngaphambili.